NRN JAPAN | Official website of Non Resident Nepali Association Japan प्रेम होस् त यस्तो पो ! |
प्रेम होस् त यस्तो पो !
विश्वमा प्रेमका अनेक उदाहरण देख्न–सुन्न पाइन्छ । प्रेम कै प्रतिक हो, भारतको आगरामा रहेको ताजमहल, जसलाई हेर्नका लागि दैनिक हजारौं पर्यटक आगरा पुग्ने गर्दछन् । जापानमा एक बृद्धले आफ्नी दृष्टिविहीन पत्नीको प्रेममा एक उदाहरणीय काम गरेका छन्, जसको चर्चा अहिले देश–विदेशमा हुन थालेको छ ।
जापानको मियाजाकी निवासी तोशीयुकी कुरोकीले आफ्नी पत्नी यासुकोका लागि एउटा विशाल र सुन्दर बगैंचा निर्माण गरेका छन् । मधुमेह रोगी यासुको दृष्टिविहीन हुन् । मधुमेहकै कारण केही वर्षअघि उनको दृष्टि गुमेको थियो ।
यो दम्पत्तीको विवाह भएको ६ दशक भइसकेको छ । तीन दशकअघि दृष्टिविहीन भएपछि यासुकोका लागि संसार नै अँध्यारो बन्यो । उनी घरमा सीमित हुन थालिन् भने कृषि पेशामा रहेका तोशीयुकी आफ्नो काममा रहँदा यासुको एक्लो महसुस गर्न थालिन् ।
यद्यपि तोशीयुकीले पत्नीको हेरचाहमा कुनै कसर बाँकी राखेनन् । पत्नीले एक्लो महसुस गर्नु नपरोस् भनेर उनले सकेसम्म साथ दिए । डेयरी पेशामा रहेका तोशीयुकीका लागि हमेसा घरमै रहन सम्भव पनि भएन ।
विस्तारै यासुकोले आफूलाई एक्ल्याउन थालिन् । एक्लोपन उनका लागि अर्को अभिषाप बन्न थाल्यो । उनी डिप्रेशनको सिकार भइन् ।
काममा हमेसा व्यस्त रहने जापानी समाजमा यासुकोको हेरचाहका लागि परिवारका सदस्यहरुले समय जुटाउन नसक्नु स्वाभाविक पनि हो । तर तोशीयुकीले नयाँ जुक्ति निकाले ।
उनले एक यस्तो बगैंचा निर्माण गर्ने योजना बनाए, जसलाई हेर्नका लागि टाढा–टाढाबाट मानिसहरु आउन् । उनको यो उद्देश्यका पछाडी पत्नी प्रेम नै थियो, ताकि बगैंचा हेर्न आउने पर्यटकहरुले यासुकोसँग भेट गरुन् र उनले एक्लो महसुस गर्नु नपरोस् ।
डेयरी पेशा नै छाडेर तोशीयुकी बगैंचा निर्माणमा जुटे । उनलाई यो बगैंचा तयार पार्न १० वर्ष लाग्यो । अहिले उक्त बगैंचा हेर्नका लागि वर्षेनि करिब सात हजार पर्यटक आउने गर्दछन् ।